Salon de l’étudiant et de l’emploi 2021
Salon de l’étudiant et de l’emploi
Omena torolalana ireo mpianatra hanohy fianarana eny amin’ny Oniversite, sy ireo nahavita fianarana ka mitady asa.
Fampianarana ambony manaraka ny kalitao sy fenitra ho an’ny rehetra afahana mitondra fampandrosoana ny firenena no isany tanjona ho an’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony .
Fantatra izany tao anatin’ny lahatenin’ny Minisitra Profesora ASSOUMACOU Elia Béatrice nandritra ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny "salon de l’étudiant et de l’emploi" teo amin’ny tokontany malalaky ny ORTM Anosy.
Ankoatra ny fandraisana anjaran’ireo Oniversite miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana dia isan’ny mampiavaka ny hetsika tamin’ity taona 2021 ity ny fandraisan’anjaran’ny sehatra samihafa miantsoroka ny fanoroan-kevitra sy ny fanomezana toro-lalana ny mpianatra te-hanohy ny fianarany na eto an-toerana na ho any ivelany.
Nomen-danja manokana ireo mpianatra nahavita ny fianarany amin’ny alalan’ny fampahafantarana azy ireo ny tolotr’asa misy mifandraika amin’ny fianarana amam-piofanana nomena azy teny amin’ny fampianarana ambony.
Trano heva maherin’ny 70 isa, mampiranty ireo sampam-pianarana sy sampan’asa maro samihafa no miandry ny mpianatra, vonona hanoro lalana sy hanome fanazavana.
Mandritra ny telo andro ity hetsika ity, 20, 21, 22 septambra 2021.
ORTM AnosyORTM AnosyORTM Anosy